monetary policy(monetary policy) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मौद्रिक नीतिको समीक्षा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी, कस्तो आउँदैछ ?
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज सार्वजनिक हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज साँझ ७ बजे सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । 'मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा तयार भइसकेको छ, अब त्यसलाई बोर्डले पास गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ ।' उनले बिजशालासँग भन�...
काठमाण्डौ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्रबैंकले थप सहज व्यवस्था गर्नुको साटो झनै कस्दै लान थालेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन तथा कतिपय सहुलियतको व्यवस्थाका कारण त्यसै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बैंकहरुले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत...
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? यसो भन्छन् सेयर बजारका सरोकारवाला
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दैछ । यसका लागि राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागले आवश्यक तयारी समेत सुरु गरिसकेको छ । आवश्यक पूर्व तयारीकै रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकले सरोकारवालाहरुसँग मौद्रिक नीतिमा हुनसक्ने वा गर्नुपर्ने संसोधन वा नयाँ केही व्यवस्थाको...
मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक, के आयो नयाँ कुरा ?(पूर्ण पाठसहित)
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असन्तुलित बैंकिङले लगानीयोग्य साधनमा दवाब सिर्जना गरी वित्तीय स्थायीत्व प्रभावित हुनसक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो । ‘बैंक तथा...
काठमाण्डौ । धितोमा राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटे पनि बैंकहरुले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकलेले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उसले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै मार्जिन कलसम्बन्धी नयाँ...
-पर्शुराम कुँवर क्षेत्री(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-जनता बैंक नेपाल मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । ओभरअलमा हेर्दा सीआरआर घटेको छ, एसएलआर पनि घटेको छ । लेण्डिङ गर्ने क्षमता बढ्छ, स्प्रेड घटेको छ, त्यसले ब्याजदरमा स्थिरता आउँछ । ब्याजदर करिडर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ,त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजाने भनेको छ, समग्रमा ठीक छ । सबै बिरामीको...
-ज्ञानेन्द्र ढुंगाना(अध्यक्ष)-नेपाल बैंकर्स संघ हाम्रा अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । यो देश र अर्थतन्त्रका लागि हामीले माग प्रस्तुत गरेका थियौ । लगानी बढ्नुपर्छ भनेका थियौ । लगानी निरुत्साहित हुनुहुँदैन, ब्याजदर स्थायीत्वका लागि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग थियो । धेरै हदसम्म हाम्रा माग सम्बोधन भएका छन् ।...
‘स्प्रेड घटाउनु गलत, बैंकर्स संघले नै इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्नुपर्छ’
-अनिलकेशरी शाह-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नवील बैंक लिमीटेड मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था राम्रा छन् भने केही नराम्रा पनि छन् । जस्तो स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । हामीजस्तो बैंकहरुलाई यो व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पर्छ । किनभने ३४ वर्ष काम गरेर एउटा भ्यालू हामीले क्रिएट...
मौद्रिक नीति समग्रमा सन्तुलित आएको छ । यसले ब्याजदरलाई केही हदसम्म घटाउने प्रयास गरेको छ । तर, सीसीडीमा लचकता ल्याएर केही हदसम्म मौद्रिक नीति बिस्तारकारी होला र बजारमा पैसाको सप्लाई बढ्ला भन्ने अपेक्षा चाहि पूरा भएन । तर, सीसीडी रेसियोमा राष्ट्रबैंकले अर्को एउटा कम्पोनेन्ट थप्यो, त्यो भनेको डिवेञ्चरहरुलाई पनि त्यही भित्र गणना गर्न दिने...
संस्थागत निक्षेपमा कडाई: एक संस्थाबाट बढीमा १५ % मात्र लिन पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले संस्थागत निक्षेपमा केही कडाई गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीले यसअघि संस्थागत निक्षेपमा उठाउँदा उपलब्ध केही सहज व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ । विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको...
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा पनि अब विपन्न वर्गमा गणना हुने
काठमाण्डौ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको हो । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जालाई...
काठमाण्डौ । बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले विदेशी विनियम व्यवस्थापनमा निकै धेरै सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विनियम व्यवस्थापनका लागि भएका केही नयाँ व्यवस्थाहरुको बिषयमा जानकारी गराएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजार...
वाणिज्य बैंकले रेटिङ गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा शाखा खोल्नेलाई सीआरआरमा ३ वर्षसम्म छुट
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ्ग गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण...
मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्तालाई सम्बोधन, यस्ता छन् बजार चम्किनसक्ने आधार
काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै सेयर लगानीकर्ता अत्तालिएका छन् । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोकर्जाको सीमालाई बढाउने आशामा बसेका लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिलाई कसरी बुझ्ने होला ? धेरैको मन जिज्ञासू भएको छ । आखिर मौद्रिक नीति सेयर बजारका लागि सुखद छ कि छैन त ? सतही रुपमा बुझ्दा...